Fitaovam-baovao: Onjam-peo mivantana amin’ny bisikileta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Jolay 2018 19:48 GMT
(Marihina fa tamin'ny 26 Novambra 2007 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nahafantatra ny momba ny bisikileta miavaka iray miasa ao Caquetá, Colombia isika tamin'ny alalan'i Juliana Rincon:
“Misy seza roa ity bisikileta ity ary misy fitaovan'onjam-peo feno mandefa fandaharana mivantana miaraka aminy, afaka mandefa Wi-max izy ary tsy amin'ny Onjam-peon'ny Vondrom-piarahamonina Andaquí ihany no hahenoina azy fa mivantana amin'ny Aterineto ihany koa“.
Ny Radiocicleta dia tetikasa ho an'ny fifandraisan'ny vondrom-piarahamonina izay nandrava ny rindrina nisy teo amin'ny trano famokarana sy ny tanàndehibe :
“Izy ity dia lovainjafy, mora kolokoloina, miaro ny tontolo iainana, ny olombelona no mampiodina azy fa tsy ny solika, afaka atao ho an'ny fanavaozana sy ny fanadihadiana, ary afaka mandeha any amin'ny toerana samihafa sy azo entina ao an-tokantrano ary afaka mitondra olona roa miara-miasa ho ekipa iray, “hoy i Juliana.
Kioska aterineto mora vidy miaraka amin'ny findain'ny aterineto
Manana mponina miisa 140 tapitrisa mahery i Bangladesh. Ambany dia ambany ny fampiasana finday folo taona lasa izay noho ny tsy fetezan'ny tany hanaovana foto-drafitrasa an-tariby (tsy niparitaka tany amin'ny faritra ambanivohitra izany). Saingy noho ny fivoaran'ny orinasan'ny finday dia efa niakatra maherin'ny 32 tapitrisa ny isan'ny mpampiasa finday tao anatin'ny taona vitsy ary manerana ny firenena ny fandrakofana ka tonga hatrany amin'ny faritra lavitra indrindra. Nanakaiky ny 25% ny tahan'ny fitomboan'ny indostrian'ny finday izay tena miavaka tokoa.
Raha latsaky ny 1% (iray tapitrisa monja) ny mpisera aterineto ao amin'ny firenena iray dia manome ny varavarana misokatra tsara ho an'ny firenena ny hiserasera aterineto izay tsy azo notanterahina tamin'ny tambajotran'ny telefonina an-tariby mahazatra (2007) na amin'ny hosina dsl lafo vidy. Mampiasa ny teknolojia EDGE mihitsy aza, izay manana hafainganam-pandeha mihoatra ny 128 kb/s amin'ny fandefasana lahatahiry, ny sasany tamin'ireo mpandraharaha .
Nanangana ny telecentre na cybercafe ho ampiasain'ny olona maro ireo mponina any ambanivohitr'i Bangladesh amin'ny alàlan'ny fampiasana ity fitaovan'ny finday amin'ny aterineto ity. Ato amin'ity tranonkala ity no hamantarantsika fa tsotra ny teknolojia takiana amin'ireny kioska Aterineto ireny:
“Iray ihany ny solosaina, izay miasa ho toy ny lohamilina: mifandray amin'ny fitaovana madinika izay tsy lehibe noho ny baoritra sigara ireo solosaina hafa. Ho an'ireo hafa, tsy misy ny fifandraisana mivantana eo amin'ny lohamilina sy ny tontolo ivelany. Avy amin'ny finday Motorola (ilay afa-mikatona toy ny vavam-biby) no fomba hanaovana izany izay mifandray amin'ny hosina kabla USB mankany amin'ny lohamilina. Mandray ny fifandraisana amin'ny Aterineto amin'ny alàlan'ny finday mandeha amin'ny Edge ny Foibe ! “
Ny fampiasana ny tambajotran'ny mpanjifa maivana toy ny karazana Ndiyo ahitana rindrambaiko Open Source [tovozina malalaka] no nampihena betsaka ny fandanian'ny tompona cybercafe, ny efitrano fianarana mampiasa tambajotra sy ny rafitra birao madinika. Ao anatin'izany dingana izany no ahafahan'ireo mpandraharaha toa an'i Abu Sufian, tompon'ny Fultola CIC, manao fampiasam-bola ahazoan'izy ireo tombontsoa amin'ny alàlan'ny fanomezana tolotra ho an'ireo mponina sy fikambanana eo an-toerana. “
Mino aho fa ireo fahombiazan'ireo teknolojia vaovao mifototra amin'ny aterineto ireo dia azo havaozina any amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana rehetra manerantany.
19 Jona 2018Mediam-bahoaka